PERIKOPA FJKM ALAHADY 28 AOGOSITRA 2016 | FJKM Amboniloha
Alahady XIV manaraka Trinite
Ezra 3,8-13 / Lioka 5,1-11 / Efesiana 4,11-16
8 Ary tamin’ny volana faharoa tamin’ny taona faharoa taorian’ny nahatongavany tany amin’ny tranon’Andriamanitra tany Jerosalema dia niantomboka Zerobabela, zanak’i Sealtiela, sy Jesoa, zanak’i Jozadaka, mbamin’ny rahalahiny sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany amin’ny fahababoana, ka nanendry ny Levita izay hatramin’ny roa-polo taona no ho miakatra izy ho tonian’ny asa amin’ny tranon’i Jehovah.
9 Dia niara-nitsangana Jesoa sy ny zanany ary ny rahalahiny, ary Kadmiela sy ny zanany, zanak’i Joda, ho tonian’ny mpiasa tamin’ny tranon’Andriamanitra, ary ny zanak’i Henadada koa mbamin’ny zanany sy ny Levita rahalahiny.
10 Ary rehefa naorin’ny mpiasa ny tempolin’i Jehovah, dia nasainy hidera an’i Jehovah ny mpisorona, sady niakanjo ny akanjony sy nitondra trompetra, ary ny Levita, zanak’i Asafa, kosa nitondra kipantsona, araka ny nandidian’i Davida, mpanjakan’ny Isiraely.
11 Dia nanao hira nifamalivaly nidera sy nisaotra an’i Jehovah izy, fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindram-pony amin’ny Isiraely. Dia nihoby mafy ny olona rehetra, raha nidera an’i Jehovah, satria vita ny fanorenan’ny tranon’i Jehovah.
12 Nefa maro ny mpisorona sy ny Levita ary ny lohan’ny fianakaviana, dia ny antitra izay efa nahita ny trano voalohany, no nitomany mafy dia mafy, nony naorina teo imasony izany trano izany; nefa maro kosa no nanandratra ny feony nihoby sy nifaly;
1 Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia nijanona teo amoron’ny Farihin’i Genesareta Jesosy;
2 ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin’ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony.
3 Ary niditra teo amin’ny sambokely anankiray izay an’i Simona Izy, dia nangataka taminy hihataka kely amin’ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely Izy ka nampianatra ny vahoaka.
4 Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy, dia hoy Izy tamin’i Simona: Mandrosoa ho any amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano.
7 Ary izy nanatsika ny namany, izay teo amin’ny sambokely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny, ary nofenoiny ny sambokely roa, ka efa saiky nilentika.
8 Ary rehefa hitan’i Simona Petera izany, dia niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy izy ka nanao hoe: Tompoko, mialà amiko, fa olo-meloka aho.
9 Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny haben’ny hazan-drano izay azony.
10 Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanak’i Zebedio, izay niombon-draharaha tamin’i Simona. Dia hoy Jesosy tamin’i Simona: Aza matahotra; hatramin’izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao.
11 Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an’i Jesosy.
12 ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin’ny asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana*, ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy, [* Gr. eklesia]
13 mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ny firaisan’ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak’Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy;
14 mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ny saim-petsy ataon’ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana;
15 fa mba hanaraka ny marina amin’ny fitiavana ka hitombo amin’ny ny zavatra rehetra ho amin’izay Loha, dia Kristy;
16 Izy no itomboan’ny tena rehetra (izay akambana sy ampiarahina tsara) noho ny fifanompoan’ny isan-tonony, araka ny fiàsan’izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjara-asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 23 août 2016